Sidee loo illaalin karaa Hackers Forever - Talooyin Ku Saabsan Cimilada
Haysashada website-yada waa sida abuurista dukaanka ama xafiiska. Websaydh waa meel aad adigudhagaystayaashu waxay ku yimaadaan oo waxay sameeyaan iibsigooda. Marka aad boggaaga ku noolaato, waa sida dukaanka loo furo si dadka loogu oggolaado. Sida caadiga ahdukaanka, dadka waa in ay ka helaan website-kaaga markii ay yimaadaan dukaanka jireed, oo laga yaabo inay iibsadaan marka ay dareemayaan in sidaas la samaynayo.
Si kastaba ha noqotee, qofku wuxuu rabi karaa inuu helo macluumaadka iyadoon fasax lagaa haysan. Justsida xafiis caadi ah, qaar ka mid ah dadka waa in ay yimaadaan website-kaaga oo ay ku helaan gelitaanka aan loo fasaxin ama isticmaalka macluumaadkaaga - soyez gestion. Natiijo ahaan,albaabbadu way leeyihiin, albaabbadu waxay leeyihiin albaabbo. A site u baahan tahay nooca nooc ka mid ah ilaalinta ka dhanka ah hackers. Khasaaradu waxay tagaan shabakadaha internetka oo wax xadaanmacluumaadka xasaasiga ah sida macluumaadka kaarka deynta ee macaamiisha. Waa jaangooyo sharci ah si loo hubiyo in website-kaaga uu lacag la'aan ka tagoweerarrada. Kiisaska intooda badan, waddamada qaarkood waxay weli ku haystaan ​​waajibaad sharciyeed.
Muddada qodobkan, Igor Gamanenko, Sare Maareeyaha Guusha Macaamiisha, wuxuu sheegaa sida looga ilaaliyo boggaaga internetka ee weerarrada internetka.
Ilaalinta qarsoodiga macmiilaha
Khasaaradu waxay leeyihiin ujeedooyin khaldan oo badan marka la samaynayo khadkooda. Xaaladaha qaarkood,waxay raadiyaan inay xadaan ama ku dhufaan sumcadda shirkaddaada. Xaaladaha kale, khaniisiinta ayaa dhibaya oo ka tagaya sawirrada qosolka leh ee ku saabsan xisaabaadka dadka ayaa saameeyajebinta..Liiska magdhawga khardhawaanku wuu qaban karaa oo aan dhammaad lahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira tallaabooyin, kuwaas oo ka dhigi kara website-kaaga mid amaan ah. Sida oo kaletuugada dhabta ah, waxay u badan tahay inay wax xadaan markaad albaabka ka furto. Tallaabooyinka aad codsan kartid si aad tan wax uga qabato waxaa ka mid ah:
Sii joogso taariikhda Waa lagama maarmaan in la ogaado khibradaha cusubwuxuu isticmaali karaa wakhti kasta. Natiijo ahaan, waad iska dhigi kartaa oo aad codsan kartaa tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waqtigii loogu talagalay, ka hor intaysan dhacin. Shabakadaha qaarkood sida "Hacker News"waxay ku siin karaan macluumaad qiimo leh
Xoojinta koontaroolka kumbuyuutarka Bogga internetka, macluumaadka maamulku waa inuu ahaado mid aad u wanaagsanqarsoodi ah. Xakamaynta maamulku waxay noqon kartaa waddo sahlan oo loogu talagalay hacker si loo helo macluumaad buuxa oo website ah. Waa muhiim inaad isticmaasho galitaankamacluumaadka iyo sirta, kuwaas oo ay adagtahay in la qiyaaso. Sidoo kale, waxaad xaddidi kartaa tirada isku dayga ku-guuldareysiga login. Taas ka reebanwaa inuu ku jiraa emaylka tan iyo markii ugu horeyba u calaamadin karo oo badalaya furaha erayga sirta ah
Nabadgelyada Nabadgelyada Dejinta derbiga dabdamiska ayaa caawin kara shirkaddaadabadan oo ku saabsan isku dayga hack. Mid waa inuu dejiyaa oo uu sii wanaajiyaa darbiyada dabka iyo sidoo kale inuu hubiyo in kombiyuutarada ay u fiican yihiin.Tusaale ahaan, kombiyuuterku wuu soo bixi karaa ka dib daqiiqado yar oo aan dhaqdhaqaaq lahayn
Ammaanka bogga internetka iyo dadka isticmaala ayaa aad muhiim u ah. Hackers waxay leeyihiin tiro badanqalabka iyo farsamooyinka ay isticmaalaan si ay u galaan website-yada iyo qabtaan qaar ka mid ah hawlaha jirran. Qaar ka mid ah jebinta joornaalada caadiga ah waxaa ka mid ah dadkaururinta xogta kaararka deynta oo laga soo qaato websiteka oo laga iibiyo shabakad madow. Si looga hortago dhibaatooyinkaas, milkiilayaasha goobta waxay isticmaali karaan tusahanHubi in ay jirto amniyad iyo nabadgelyo ku filan. Tallaabooyinkani waxay ku badbaadin karaan adiga, shirkaddaada ama shaqaalahaaga malaayiin lacag caddaan ah.